“Dhowra salaadaha iyo salaadda dhexe oo istaaga Allaah horti idinkoo adeecsan.” Suuradda Al-Baqara: Aayadda 238.
Kani waa kitaab kooban oo ka hadlaya Salaadda waxaan qoray markii aan arkay baahida deg degga ah ee loo qabo. Waxaan ka arkay jaceyl iyo dadaal lagu farxo oo ammaan mudan rag iyo dumar wiilal iyo gabdho, oo ila soo xiriiray, oo jaceyl u hayo barashada diiinta xaqa ah, Islaamka, Risaaladii iyo Fartiintii u dambeysay ee ka timaadda xagga Ilaahay. Kuwaa oo baahi u qaba inay gutaan waajibyada iyo xilalka Ilaahay saaray ay salaaddu u horreyso, salaadda oo ah tiir dhexaadka Islaamka. Salaadda uu Allaah ka yeelay calaamadda lagu kala saaro gaalka iyo muslimka.
Salaaddu waa tiirka Islaamka uu ku taagan yahay iyo udub dhexaadka diinta. Salaad la’aanina waa diin la’aan. Diimahii hore salaaddu waxay ahayd qaybta ugu muhimsan cibaadooyinka ay Rususha iyo intii raacday aad ugu dadaali jireen.
Waxayna Rasuulka s.c.w. nafti ka baxday isagoo leh:
“Assalaah Assalaah . Salaadda .. Salaadda.”
“Shan salaadood buu Allaah ku waajibiyey addomihiisa maalinta iyo habeenka. Qofkii dhowraa ee muwaxid shirki ka fayow wuxuu Allaah u ballan qaaday inuu jannada geliyo, qofkii aan dhowrin salaadda cahdi iyo ballan Alle agtiisa uma taal. Hadduu doono wuu ciqaabi, hadduu doonana wuu iska cafin.”